Zingenisile ekulingiseni izingane zaseNtuzuma
Bongiwe Zuma | June 21, 2021
UKULINGISA ngeminye yemisebenzi engelula futhi edinga isikhathi isipiliyoni nobuchule bokuxoxa indaba nokuvame ukuba yinkinga kubantu abaningi. Izingane zaseNtuzuma, esezizakhele udumo ngeziqephu ezibonakala kwiYoutube, zenza umsebenzi wokulingisa ubukeke ulula kakhulu nokufakazelwa yindlela ezithandwa ngayo. Abafana-the boys vs Amantombazane-the girls series, okuwumdlalo owenziwa yiSasenathi Studios kaSanele Sikhakhane (24), unezinyanga ezimbalwa uqalile kodwa usulandelwa okudlula eminye imidlalo esike yabonakala nakwithelevishini.
Lo mdlalo ugabe ngamantombazane nabafana abancane basendaweni okubalwa kubo u-Amanda (onguMaGumede), Fatima olingisa ekaFatima, Thando (owuBoss Lady), Lwandle (owuMncanyana), Luyanda (owuLuya), Nkanyiso (owuMshayiwaso), Luthando (owuSkeleton).
Ngaphandle kwabo bakhona nabanye okubalwa
USanele uthe ngesikhathi kuqala ukuvalwa izwe wabona ukuthi izingane ngakubo ziba wuvanzi, zingaze zigcine sezenza izinto ezingafanele, kungcono aziqoqe.
"Ngiyakuthanda ukubhala, nginenqwaba yemidlalo engiyibhala ngiyibeke ngoba ngiyakuthanda ukufunda nokubhala. Ngithe sengibona zinesizungu izingane ngabona kungcono siqophe umdlalo wethu sikhulume ngempilo yamantombazane nabafana elokishini. Sibheka izinto eziningi ezinhle nezimbi ezenzeka uma abafana namantombazane bekhula," kuchaza uSanele.
Eqhuba uthe okumhlaba umxhwele ngalaba balingisi bakhe ukuthi yize bebencane futhi bengakufundele kodwa bakhombisa elikhulu ikhono nokwenze wavula ikhasi kwiYoutube eselinabalandeli abangaphezulu kuka-151 000 ngesikhathi esincane.
"Inhloso yami enkulu ukuthi sikhule kulo mdlalo njengoba neziqephu zethu ziqhubeka zikhule nazo lezi zingane. Sifisa ukuqopha namafilimu ethu sisonke nezingane zikhule kulo mkhakha size saziwe nasemazweni aphesheya kwezilwandle. Noma zingakhula izingane zibe nesipiliyoni zibizwe kweminye imidlalo kodwa inhloso ukuthi zikhule ndawonye zenze imidlalo ezozakha kanye,"kusho uSanele.
Yize bevamise ukuqopha ngempelasonto noma uma kuvalwe izikole, kodwa abagcini nje ngokulingisa kodwa babuye bahlanganyele balekelelane nasezifundweni zesikole ezihlukile.
"Isikole sibalulekile yisona engisigqugquzela kakhulu, ukulingisa sikwenza ngesikhathi bengenzi lutho futhi nabazali bayakujabulela ukuthi senza le midlalo," kusho uSanele.
Ephetha uthe yize sekukhona abazama ukuntshontsha ezinye zeziqephu zabo, bazame ukuzenza bona kodwa ngeke baphele amandla ngoba baphokophele phambili.